Faroole oo Handadaad u Jeediyay Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Faroole oo Handadaad u Jeediyay Somaliland
Horjoogayaasha maleeshiyada Gobolada Bari ee u qaabilsan Xuuraanka ayaa eedeymo u jeediyay maleeshiyaadka Maamulka la magac baxay Somaliland, kadib markii muddo dagaalo kula jireen Koox islaamiyiin ah oo hubeysan kana amar qaata wadaad degaanak Galgala ka mid ah laguna magacaabo Maxamed Saciid Atom.
Wararka ayaa sheegaya in Horjoogayaasha Ciidamada Faroole ka tirsan ayaa sheegay iney caddeymo u hayaan in dagaalada mudada ka scoday degaanka galagal ay ku lug leeyihiin Maleeshiyada Somaliland, waxeyna intaasi raaciyeen in Hogaamiye kooxeedka Atom uu haatan ku sugan yahay magaalada degaano ku dhow magaalada Burco ee Togdheer.
Horjoogayaasha ayaa sheegay in dhowaan dagaalo ka dhacay degaanada Colmadow oo ka tirsan Toga Sugarre oo wada hoos taga degaanka Galagala ay ku dileen horjooge ka tirsan Somaliland. Horjogahaan ayaa lagu sheegay magaciisa Saciid Saalax Ceynab, wuxuuna ka sioo jeeda beesha Habarjeclo, sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan maamulka oo lagu xoojiyay daagaalada Galgala kana yimid magaalada Burco, kuwaasoo tiradadoodu lagu qiyaasay 70-dabley ah, ay ku lug lahaayeen dagaalada todobaadyada ka socda degaanka Galgala.
Horjoogaayasha Ciidamada Faroole ayaa muujisay sida ay uga walwalsan yihiin ku luglahaansha dagaalada iyo saameynta Maamulka la magacbaxay Somaliland,waa sidey oraahda u dheeheen, waxeyna sheegeen in muddo ah ay wadashaqeyn ka dhaxeysay Malayshiyaadka degaanka, waxaana ay horey u xaqiijiyeen in dhaawacyo kamid ah Maleeshiyada Atam lagu dabiibayey Magaalooyinka Barbara, Burco & Hargeysa.